Ndị na -emepụta ihe na ndị na -ebubata ya na China PPGI Steel Steel
Home > Ngwaahịa > PPGI Steel eriri igwe
PPGI Steel eriri igwe Ndị nrụpụta
Qingdo Sino Witop Steel CO., LTD bụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe nke eriri igwe PPGI. Sino Witop Steel bụ onye nrụpụta PPGI na -ebubata ngwaahịa na China. Anyị nwere ndị ọchụnta ahịa azụmaahịa mba ofesi ọkachamara, nke na -emepụta ma na -ebupu eriri igwe PPGI dị ka mkpa teknụzụ dị iche iche si dị na omume azụmaahịa maka ndị ahịa.
Ogwe igwe PPGI nwere ịdị arọ, ọmarịcha ọdịdị na ezigbo nguzogide corrosion, enwere ike ịhazi ya ozugbo. Ogwe nchara PPGI bụ ihe dị mkpa eji ewu ụlọ: elu ụlọ, ihe owuwu ụlọ, ogwe sandwichi, ihe na -eme mkpọtụ, oghere ikuku, wdg.
Ka ọ dị ugbu a, ebupula igwe mkpuchi PPGI n'ihe karịrị mba 50 na mpaghara dịka South Korea, Philippines, Thailand, Indonesia, Dubai, Iraq, Chile, Brazil, Kenya, Algeria, Ghana, ndị ahịa nabatara ya nke ọma. Qingdao Sino Witop Steel Co., LTD ji ezi obi kpọọ ndị ahịa na ndị enyi si mba ọzọ ka ha bịa.
Enwere ike ịhazi PPGI Steel eriri igwe emere na China na ọnụ ala ma ọ bụ ọnụ ala. Ngwaahịa anyị bụ SGS na BV gbaara ezi àmà. Na mgbakwunye, ngwaahịa anyị na -adigide ma anyị na -enyekwa akwụkwọ ikike afọ 10. Witop Steel bụ ndị nrụpụta na ndị na -ebubata ngwaahịa na China na ndị ama ama PPGI Steel eriri igwe. E wezụga, anyị na -akwadokwa nnukwu nkwakọ ngwaahịa. Ọ bụrụ na m nye iwu ugbu a, ị nwere ya na ngwaahịa? n'ezie! Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, anyị ga -enye ọ bụghị naanị nlele efu kamakwa ndepụta ọnụahịa na nkwupụta. Ọ bụrụ na m chọrọ ịre ahịa, ọnụ ahịa ole ka ị ga -enye m? Ọ bụrụ na nnukwu ọnụ ahịa gị buru ibu, anyị nwere ike ịnye ọnụahịa ụlọ ọrụ. A nabatara gị ka ị bịa ụlọ ọrụ anyị ịzụta ihe ọhụrụ, ego mbelata na ogo dị elu PPGI Steel eriri igwe. Ị nwere ike ijide n'aka na ịzụta ngwaahịa mbelata n'aka anyị. Anyị na -atụ anya ka gị na gị rụkọọ ọrụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị ugbu a, anyị ga -aza gị n'oge!